Kusho ukuthini i-Sun Quincunx Jupiter? - Isikhathi Sokuzalwa Komuntu
Kusho ukuthini i-Sun Quincunx Jupiter?
Imibuzo Nezimpendulo Ezinhle Kakhulu - I-Sun quincunx (engahlanganisi) i-Jupiter
Ilanga quincunx JupiterOkwemvelo kudala ukungezwani maqondana nempumelelo yomuntu siqu empilweni. Ukuphusha ngamandla kuyindlela yokudambisa ukungezwani yingakho wenacanimvamisa kubonakala kunenhlanhla. Kodwa-ke, ngokubeka okuningi kwakho, ubunikazi bakho kulayini, okweqilecankubangele izinkinga ngezikhathi ezimbi ngenxa yecala noma ukulutha.18. 2014.
Sanibonani nonke futhi ngamukelekile futhi kokunye okukulesi sihloko seviki. Kuleli sonto, isonto eliqala ngoMeyi 17, empeleni kuzoba nama-athikili amabili, futhi leli ngelesibili elisebenza ngezinto ezimbalwa ezahlukahlukene ezenzeka kuleli sonto. Ngakho-ke lesi sici sesibili engifuna ukugxila kuso kuleli sonto besinamanzi amancane, futhi angikwazanga ukumelana nokungeza.
Leli yilanga elisewele lamawele iJupiter ePisces. Ngakho-ke lesi sici sizoba ngoLwesihlanu ngoMeyi 21, mhlawumbe ngoMeyi 22 kuye ngokuthi ukuphi. Ah.
Isici senzeka ngelanga kuma-zero degrees Gemini, isb. Ngemuva nje kokuthi ilanga selidlulile kusibonakaliso seGemini kanti inkathi yamawele isiqalile kanti iJupiter isese-zero degrees Pisces.
Ngakho-ke kwenzeka ngemuva nje kokuthi iJupiter ingene ePisces, futhi isizathu esisodwa ebengifuna ukusikhetha lesi sici ukuthi kungokokuqala ukuthi enye iplanethi ihlangane noJupiter ePisces. Ngakho-ke lokhu kuzosikhombisa okuthile, mhlawumbe kuveze okuthile, noma kusinikeze ukuqondisisa ngomkhuba omude weJupiter-in-Pisces. Ngakho-ke ake siqale ngesici seJupiter, isikwele selanga uqobo.
Lesi yisici esisodwa sokwelula izinto, ukweqa umkhawulo wabo, ingabe sidlula umkhawulo bese sifika endaweni yokukhula kanye nenqubekela phambili yemilingo, noma sidlula umkhawulo siye endaweni lapho siphuka noma singaphula khona. Lowo ngumbuzo wamarandi ayizigidi. Ngijwayele ukucabanga ukuthi kufana nalokhu kunwebeka okungakhululeki okuza nokukhula, mhlawumbe ukukhuphuka futhi, futhi lokho kuhlobene nokuthi iJupiter isesimweni esihle njengakwelinye izwe lakubo lasePisces elisayina lesi sici.
Noma kunjalo, kungabukwa njengesici esihle nesici esinokungqubuzana okuncane ngezizathu eziningi. Inhlanganisela enhle ivela eqinisweni lokuthi iLanga neJupiter bahlangana ndawonye esicini esisodwa. Ilanga neJupiter zaziwa ndawonye ngokuthi, um, kunezinto eziningi ezinhle kakhulu ezingashiwo ngala maplanethi amabili.
UMarsilio Ficino, isazi sezinkanyezi esivela eNkathini Ephakathi, eh, Renaissance, kufanele ngithi umlumbi, uyazi, umfana nje oyindida, wakhuluma ngezinhle ezintathu ekufundweni kwezinkanyezi. Izinhlobo ezintathu zamaplanethi anika impilo noma aqinisekisa impilo, njengelanga, iJupiter neVenus. Njalo lapho sibona iLanga neJupiter zihlangene, ngiba nomuzwa wokuthi okuthile kuyaphilisa, noma kukhulisiwe, noma kuthuthukisiwe, okuthi ngandlela thile kuqinisekise, kukhule, noma kukhuthaze.
Ilanga neJupiter ndawonye banayo le mfanelo enamandla impela yokuzethemba, noma ukuzethemba, ngangokunokwenzeka. Kungani kungafanele ngizame lokhu? Bayazi ukuthi akukhathazwa kakhulu ukusebenza, kepha kugxila kakhulu kokuhlangenwe nakho okusha noma mhlawumbe kungaholela ekugcwalisekeni, noma impela umqondo wokuzama okuthile ukunweba nokwandisa ulwazi lwakho. I-Sun square Jupiter, yize kuyisici esiyisikwele ngicabanga ukuthi inezici ezithile ezinhle impela, kodwa kusimo sesici sesikwele ukuletha okuncane kwalolo bunzima noma ukungqubuzana.
Futhi la maplanethi amabili asezimpawu zawo zamanje njengamanje, ilanga lisanda kufika eGemini emahoreni wokugcina angama-24, kanti iJupiter ibisePisces kuphela isonto. Ngakho-ke bobabili bazama ukuthola isimo sezwe ngokuya ngendawo yabo futhi manje kufanele babhekane nengcindezi evela kumuntu onokubaluleka okuhlukile noma isethi ehlukile, i-ajenda ehlukile. Ngakho-ke ukungqubuzana noma ukungezwani lapha kungahle kuhlobene nezinhlelo zokuncintisana, amaphupho, noma izinto eziza kuqala.
Kungaba futhi nangokungezwani phakathi kwamaqiniso, imininingwane nedatha okumelwe yiLanga eGemini uma kuqhathaniswa nokufuna ukulandela umuzwa noma ukulandela iphupho noma umbono, okungasiza kakhulu iJupiter ePisces. Njalo lapho sinezici ze-quadratic sidinga ukulungiswa noma uhlobo oluthile lokuxhumana nokulungiswa phakathi kwamaplanethi amabili. Emsebenzini wethu wesici kunezinhlobo ezahlukene zemithetho noma imibono elawula ukuthi amaplanethi amabili ahlangana kanjani futhi ahlanganyele kanjani futhi kulolu hlobo oluthile lwesici neJupiter ePisces neLanga eGemini, iJupiter iba yilokho okwaziwa njengethonya elinamandla kuzo. babe nelanga eGemini.
Futhi lelo yigama lobuchwepheshe elisho ngokuyisisekelo ukuthi iJupiter izoba nethonya elinamandla noma elinamandla ukuze ilanga likwazi ukuthatha lokho iJupiter ePisces imayelana nalokhu kulungiswa kwamaplanethi. Ngakho-ke iJupiter ePisces ngandlela thile inamandla lapha futhi izoqala ukuhlaba umxhwele leli langa eGemini ngalombono wokuthi idatha nolwazi lukhulu, kepha kuphela uma zifeza injongo enkulu, kuphela uma zikusondeza ePhusheni elilodwa noma umbono owenelisayo, noma nje lapho kukusiza ukuthi unikele noma usize abanye nganoma iyiphi indlela. Lezi yizo zonke izinto iJupiter egxile kakhulu kuzo ePisces.
Mayelana noLwesihlanu ngoMeyi 21, lapho lokhu kwenzeka, ezinye izinto zingenzeka. Ungazethemba kakhulu ukuthi usukulungele ukuthatha ukweqa okholweni noma uzigaxe esimweni esingaba yingozi, kepha unelukuluku lokwanele noma unentshisekelo eyanele yokuthi ubungozi bufanele. Futhi ngicabanga ukuthi kungenye yezinto lesi sici esithile seSun Jupiter esibilisela kuso, ukuthi noma ungawutholi umphumela obuhlose ukuwuthatha ekuqaleni, kufanele ubungozi.
Kukhona okuthile okubaluleke kakhulu ukuzwa noma othile ozoxhumana naye futhi axhumane naye. Ngakho-ke lapho uphuma endaweni yakho yokunethezeka zama okuthile okuhlukile okuhlukile, mhlawumbe okungaziwa kuwe, kuyindlela enhle yokusebenzisa lawo mandla. Kufana nokuzondla nokuzama uhlobo oluthile lokufuna ukwazi lokuhlola nje ukubona ukuthi igama elithi yebo likuthatha likuthathaphi.
Ngakho-ke ukuthi yebo kuyisu elihle. Ilanga likwele isixwayiso sikaJupiter ukuthi singadlula amakhono ethu, futhi uyazi ukuthi kunezikhathi eziningi ebhizinisini noma empilweni lapho kuthiwa kufanele usayine futhi ufeze izethembiso. Lolu hlobo lwesici seSun Square Jupiter empeleni luthembise ngokweqile futhi ludlulise ngokweqile, futhi lokhu kuyihaba uma wenza ngokweqile, uthatha kakhulu, bese ungeke nje wenzeke noma akulona iqiniso .
I-Sun Square Jupiter in Signs Changes Kukhona ikhono elenza imisebenzi eminingi noma ithalente lapha, futhi kwabanye bethu sizokwethembisa ngokweqile noma sibeke ngaphezulu amandla ethu okusho izinto eziningi kakhulu bese sivele sibe nalokhu kuhlanya okungathi shu 24-36 Amahora lapho silwela ngempela ukwenza zonke izinto. Ngakho-ke abanye bethu bangakhiqiza ngempela ngoba sizithwese ngokweqile. Abanye bethu bazoba nokuwohloka okuncane lapho kufana nokuthi ngithathe kakhulu kimi futhi angikwazi ukwenza konke.
Ilanga liseGemini, ngakho-ke ukuxhumana kuzoba kubaluleke kakhulu lapha, uma uthola iqhwa, ukhungathekile, uma kuningi kakhulu epuletini lakho, tshela othile. Lesi yisikwele esiguqukayo kakhulu, iLanga eGemini, iJupiter ePisces, izimpawu zethu ezimbili kwezine eziguqukayo, ngakho-ke izinto zingagobeka. Singakwazi ukuzivumelanisa nezimo, singashintsha, asikhiywanga njengamaplanethi ngezimpawu ezingaguquki ezakha isikwele.
Ngakho-ke uma uthola ukuthi uthembise ngokweqile noma ukuthi awukwazi ukuletha lokho okuthembisile, khuluma nje ngakho. Kungalungisa noma kungalungisi izinto, kepha kuzothatha okunye kwalokhu kuphazamiseka futhi kumise ukuxokozela kwangaphakathi. Ngakho-ke lokhu kungukuntywila okuhle kakhulu kusici seSun Square Jupiter sangoMeyi 21 kodwa ngethemba lokuthi sizokusiza ukuthi uzulazule kule ngxenye yokugcina yesonto ngalokhu kugcwele kakhulu, iSun Jupiter njengoba ngifuna okuningi, ngifuna, nambitha konke, noma ngenza zonke izifundo, noma uxhumane nabo bonke abantu, ngakho-ke umdlandla uyancomeka kakhulu.
Kepha empeleni kunzima ukusebenza nakho, ngakho-ke mhlawumbe nje sebenzisa enye intando yethu yokuzikhethela ukuze ucije izinhlelo zethu, futhi usuvele uyazi, uhlela okuthile okunokuluma ngokwanele okungaba yikho, singagcwala noma saneliseke. esikhundleni sokuminza nje. Lokho kungenye yezinciphisi zeJupiter engicabanga ukuthi.
Ngakho-ke lesi yisikwele selanga sikaJupiter. Uma ungathanda imininingwane engaphezulu ngeJupiter nePisces, ngisanda kubamba i-webinar ejulile yemizuzu engama-90 kuJupiter nasePisces ebizwa ngokuthi 'Ukuphupha Ikusasa'. Inokuxubana kwemininingwane yezobuchwepheshe mayelana neJupiter in Pisces, ezinye zezindaba ezisenganekwaneni kanye nezincazelo mayelana neJupiter in Pisces, kanye nezeluleko ezithile ezisebenzayo zendlela yokusebenza nalomjikelezo, kuya ngokuthi uyaphi nokuthi uzokwenzeka nini nokuthi lokho kungakuthinta kanjani.
Ngakho-ke uma unesifiso sokufunda okwengeziwe ngeJupiter ePisces, sicela uvakashele iwebhusayithi yami kellysastrology.com bese ubuka iJupiter ePisces, Future Dreams webinar. Ngiyethemba iJupiter ePisces isibonisa yonke eminye iminikelo emihle manje njengoba sisalelwe yizinsuku ezimbalwa.
Ah. Jabulela leso sici ngenkathi siseqenjini lempelasonto futhi sizokubona futhi maduze.
Ngabe i-Inconjunct iyefana neQuincunx?
I-ukuhlangananomaquincunx(la magama asetshenziswa ngokushintshana) isici ekufundweni kwezinkanyezi senziwa phakathi kwamaplanethi ahlukaniswe cishe ngama-degree angama-150. Ngaphandle kokuthi kungaphandle kwesibonakalisoquincunx, izimpawu azigcini nje ngokungezinto ezihlukile, futhi zingezokuhluka okuhlukile. Isibonelo, thatha i-Leo-Pisces.
Maureen, ngiyabonga ngombuzo wakho. Ama-Quincunxes yizinto ezikhohlisayo. Ziyizici eziphelele zesibonakaliso, kepha zisebenza kuphela njengezici ze-harmonic.
Futhi banokuhlangenwe nakho okuhluke kakhulu, kuya ngokuthi kukhona amaplanethi amabili womuntu siqu, iplanethi yomuntu siqu kanye neplanethi yangaphandle, noma isici esinamandla njengokuhamba noma ukuqhubeka. Ake siqale ngezisekelo. I-quincunx iyisici se-12 seharmonic esenzeka phakathi kwamaplanethi amabili ahlukaniswe nge-150.
Izimpawu ezibandakanyeka ku-quincunx azifani ngokufana: zinezici ezihlukile, izindlela ezihlukile, kanye ne-polarities. Ekufundweni kwezinkanyezi kwendabuko, ukubhangqwa kwezimpawu ku-quincunx kwathiwa 'kwenqatshwa' ngoba izimpawu zazingabonani. I-quincunx - kwesinye isikhathi ebizwa ngokuthi yi-incununct - ibithathwa njengengafani nesici.
Kwasho ukungabi nokuxhumana okuphelele phakathi kwamaplanethi amabili. Izimpawu zesikwele noma zokuphikisa zinokufana okuningi. Izikwele zivela phakathi kwamaplanethi ngezibonakaliso ezinesimo esifanayo - iKhadinali, i-Fixed, noma i-Variable - kepha izakhi ezahlukahlukene nokuphola okuhlukile.
Isikwele njalo siqukethe uphawu lobudoda (umlilo noma umoya) nophawu lwesifazane (umhlaba noma amanzi). Izikwele ziyisici se-4 se-harmonic. Zenzeka phakathi kwamaplanethi ahlukaniswe izimpawu ezintathu, futhi isikwele esiqondile silingana ne-engela engama-90 degree.
Kusenokuningi okufana ngakho ngoba amaplanethi abelana ngesimo esifanayo, kepha kubonakala sengathi ayaphikisana. Izikwele zenza ukungezwani nokungqubuzana futhi zenze isenzo. Ukhiye wezikwele ukuthola indlela amaplanethi amabili angasebenzisana ngayo ukwakha okuthile.
Ukuphikisana kwenzeka phakathi kwamaplanethi ngezimpawu ezinesimo esifanayo nobumbano - phakathi komlilo nomoya noma umhlaba namanzi. Okuphikisanayo kuyisici sesi-2 esihambisanayo. Zenzeka phakathi kwamaplanethi anezibonakaliso eziyisithupha ezihlukene futhi ukuphikisana okuqondile kungu-180 degree angle.
Amaplanethi amabili asebenza ngendaba efanayo kepha asondela kuyona evela ezinhlangothini eziphambene. Ukulingana kuhlale kunokwenzeka nokuphikisana ngoba amaplanethi anokufana okuningi. Kodwa-ke, ukuphikisana kuvame ukukhombisa ubudlova obedlulele nengxabano.
Bahlala bedlala ebudlelwaneni. Uthatha isikhundla seplanethi eyodwa bese uhlela izingqikithi zakho zenye iplanethi uye kwenye bese uyibona sengathi ivela ngaphandle kwakho. Zombili izikwele nokuphikisana kuthathwa njengezinto 'eziyinhloko'.
Futhi kuyizici eziphelele zesibonakaliso. Lokhu kusho ukuthi YONKE iplanethi e-Aries iyisikwele YONKE iplanethi eCancer. Futhi YONKE iplanethi eTaurus ibhekene nayo YONKE iplanethi eScorpio.
Vele, lapho i-engeli eseduze phakathi kwamaplanethi isendaweni efanele, ukuxhumana kuyoqina. Ama-Quincunxes nawo angumbono ophelele wesibonakaliso ngoba avela phakathi kwamaplanethi anezimpawu ezinhlanu ezihlukene. Noma kunjalo, i-quincunx isebenza kuphela njengezici ze-harmonic.
Amaplanethi kufanele abe ngaphakathi kwamadigri ambalwa we-angle engama-degree angama-150 ukuze abe ku-quincunx. Uma unamaplanethi amabili womuntu siqu ku-quincunx nomunye, lawo maplanethi ayaphoqeleka ukuba abe nobudlelwano. Abahlangani ngalutho futhi wonke umuntu angajabula kakhulu uma bengahlangene ngalutho nomunye, kepha i-quincunx ayibaniki yona.
Njengoba i-quincunx iwuphawu lokuphikisana, amaplanethi acabanga ukuthi kumele babe nendawo efanayo futhi bazame ukuthola ibhalansi. Kepha akukho okuvumelana ngakho futhi akukho ukulinganisela okungenzeka. Ukuveza iplanethi eyodwa, omunye kufanele acindezele enye.
Kuthatha inani elikhulu lamandla ukuxazulula lezi zingxabano, futhi kungakhathaza kakhulu. I-quincunx phakathi kweplanethi engaphandle (okukhona kulo mongo kufaka phakathi iSaturn) neplanethi yomuntu uqobo iyindaba ehlukile. Kulezi zimo, uhlela iplanethi yangaphandle iye kwabanye abantu (noma umhlaba wonkana) bese uhlangabezana nokuphazamiseka okungahleliwe, okungalindelekile, nokungaqondakali ezindabeni zeplanethi yakho.
Okwenza i-quincunx evela kwiplanethi yangaphandle ibe nzima kakhulu kunesikwele noma ukuphikiswa okuvela kwiplanethi yangaphandle yinto engahleliwe. Ukuba nesikwele samaplanethi esingaphandle noma okuphambene neplanethi yomuntu siqu kuletha izinselelo nezingxabano, kepha uyazi ukuthi yini ongayilindela. Kukhona imbangela ecacile nobudlelwano bomphumela.
Njalo lapho wenza u-A, B kwenzeka. Uma ungafuni ukuzwa uB, ungenzi u-A. Nge-quincunx, noma kunjalo, asikho isizathu esicacile nomphumela.
Kwesinye isikhathi kwenzeka u-A, B, kepha hhayi ngaso sonke isikhathi. Futhi kwesinye isikhathi iB kubonakala sengathi yenzeke ngokuluhlaza okwesibhakabhaka. Lokhu kungadala isimo esaziwa nge-psychology ngokuthi 'ukungabi nalusizo okufundiwe'.
Uyesaba ukuthatha isenzo ngoba awukwazi ukubona imiphumela. Khumbula ukuthi uhlangabezana kanjani ne-horoscope yakho kunqunywa izinga lakho lokuqonda, hhayi ukubhula ngezinkanyezi. Izici eziyinselele zeshadi lakho lokuzalwa azikhawuli noma zikugcine ekujabuleni.
Zonke izimpawu ku-horoscope zinezisho eziphansi neziphezulu zokuqonda. Ama-quinkunxes futhi angaba yizici ezinamandla - lapho iplanethi ehambayo, ethuthukile, noma eqondisiwe yakha i-quinkunx kwiplanethi eshadini lakho lokuzalwa. UBernadette Brady uthi ama-quincunxes ashukumisayo adala ukuphela nokwehlukana ngoba aguqula ngokuphelele umongo.
Ngokusho kukaBrady, izikwele ezinamandla zikuphoqa ukuthi ushintshe indlela uthathe izinyathelo ezintsha nezingajwayelekile, ngenkathi ukuphikisana okunamandla kukuphoqa ukuthi wenze isinqumo noma uthathe isinqumo.
Kusho ukuthini ukungahlangani?
zakudala, zemizimba yasezulwini noma izimpawu zezinkanyezi. : kushoda ukuhlangana.
Kusho ukuthini iSun conjunct Jupiter?
Lapho kushadi lokuzalwa, i-Isihlanganisi se-Sun Jupiter sishouthanda ukuthola ulwazi olusha futhingabefunda okuningi empilweni ngokuhamba. IplanethiJupiterkukhuthaza umuntu ukuthi athathe amathuba okungenzeka awalethele inhlanhla nenhlanhla futhi andise ingqondo yabo ngokomoya.2. 2020.
Yisiphi isici ama-degree angama-150 ekufundweni kwezinkanyezi?
Quincunx. I-quincunx i-engeli ye-150(5/12 kwe-360 ecliptic). I-orb ye-3.5 ivame ukuvunyelwa ngokuya ngamaplanethi abandakanyekile. Umphumela wayo ubonakala kakhulu uma kukhona unxantathuisicikweplanethi yesithathu kunoma iyiphi enkuluisicikumaplanethi ama-2 ayi-quincunx.
I-quincunx ingaki amadigri?
Quincunx. TOquincunxi-engeli engu-150 (5/12 ye-360 ecliptic). I-orb ye-3.5 ivame ukuvunyelwa ngokuya ngamaplanethi abandakanyekile. Umphumela wayo usobala kakhulu uma kunesici esingunxantathu kwiplanethi yesithathu kunoma yisiphi isici esikhulu kumaplanethi ama-2 angukuthiquincunx.
Ama-Quincunxeskukhonaisetshenziswe kuihluzo zanamuhla zekhompyutha njengephethini ye-multisample anti-aliasing.Quincunxizigcawu zesampula zokulwa nokulwa emakhoneni nasezikhungweni zepikseli ngayinye. Lawa maphuzu ayisampula amahlanu, abunjwe ngoquincunx, ahlanganisiwe ukukhiqiza i-pixel ngayinye ekhonjisiwe.
Yiziphi izici ezinzima ekufundweni kwezinkanyezi?
Kepha nasezikhathini zanamuhla,izicikubhekwa noma yiphikanzima(isikwele esingu-90, ukuphikiswa okungu-180) noma okulula (i-120 trine, i-60 sextile). Isihlanganisiisici(empeleni u-0, isaphulelo se-orb) kungaba kwisigaba ngasinye, kuya ngokuthi imaphi amaplanethi amabili ahlanganayo.
Yini iphethini ye-quincunx?
TOquincunx(/? kw? n. k ?? ks /) iyi-geometriciphethiniequkethe amaphuzu amahlanu ahlelwe ngesiphambano, amane awo akha isikwele noma unxande futhi owesihlanu enkabeni yawo. Kwakha ukuhlelwa kwamayunithi amahlanu kufayela le-iphethiniehambelana nendawo emihlanu emadayisi ayizinhlangothi eziyisithupha, amakhadi okudlala, nama-dominoes.
Yiziphi izindlu zesici seJupiter?
Izici zikaJupiterKu-Astrology,Jupiterunezingu-3izici.Izici ze-Jupiter5thindlukusuka endaweni yayo, 7indlukusuka endaweni yayo naku-9indlukusuka endaweni yayo. Ngakho-ke, umaJupiteriku-1indlueshadini kuzobe kunjaloisici5thindlu, 7indlufuthi 9indlu.
Kusho ukuthini i-Jupiter conjunct Saturn?
NgeJupiterukwakha i-isihlanganisoukuISaturneshadini lokuzalwa, ukuthambekela kwakho ekuboneni kokubili amandla kanye nemikhawulo yanoma isiphi isimo esinikeziwe kunezinzuzo zako, kukwenza ube umuntu onengqondo kakhulu.